Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft
Ungayisusa kanjani a i-akhawunti de Microsoft
Después de usar la sincronización de idatha de Outlook, OneDrive y Windows durante varios años, ha decidido dala una okusha cuenta de Microsoft y eliminar la anterior. Ya ha tenido éxito en la primera operación, mientras que todavía no ha logrado comprender uyisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft. Bueno, si ese es el caso, no se preocupe: de hecho, puedo explicarle, paso a paso, todo lo que hay que hacer ukuze completar esta "hazaña".
Eliminar una cuenta de Microsoft es un proceso realmente fácil de hacer y solo toma unos minutos de tiempo libre completarlo. Lo único: recuerda que, con tu cuenta, también ukulahlekelwaás el acceso a los archivos en OneDrive, al buzón de Outlook, a la sincronización de datos de Windows y a todos los amasevisi conectados a este último (por ejemplo, Xbox Live, Microsoft 365 para izinhlelo zokusebenza de Office, etc. en).
Uma konke kucacile kuwe futhi usahlose ukuqhubeka, hlala phansi unake ukufunda ulwazi engizokunikeza lona. Nginesiqiniseko sokuthi ekugcineni uzobe usukulungele ukuvumelana nami ukuthi ukuqeda ukususwa kwe-akhawunti ye-Microsoft kwakungeyona inkinga. Vimbela inkulumo futhi siqale!
Ngisusa kanjani iMicrosoft
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft kusuka kudivayisi
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft ku-Windows
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft ku-MacOS
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft ku-iOS / iPadOS
Ungayisusa kanjani i-akhawunti yamaqembu e-Microsoft
Si te unesithakazelo saber Ngiyisusa kanjani i-akhawunti yami ye-Microsoft?, qhubeka ufunde: yonke into ichazwe ngezansi. Okokuqala, ngizokuhambisa ngezinyathelo zokuqala ongazithatha ukugwema izinkinga noma ukubheka okungathandeki.
Okokuqala lutho, quiero aclarar inmediatamente un punto. Como ya se mencionó al comienzo del tutorial, una cuenta de Microsoft no es más que la combinación de una dirección de correo electrónico y una contraseña que se utilizan para acceder a servicios como I-Outlook.com, I-OneDrive, I-Microsoft 365 Los I-Xbox Live.
I-akhawunti ye-Microsoft iyefana nekheli le-imeyili Hotmail Los panoramaNgakho-ke uma wakhe i-akhawunti ye-Hotmail ngaphambilini futhi manje ufuna ukuyisusa, ukuqhubeka kuzosusa ne-akhawunti yakho ye-Microsoft. Kunjalo?
Otra cosa importante que debe saber es que Las cuentas de Microsoft se pueden asociar con varias suscripciones, como las de Ihhovisi (I-Microsoft 365) kanye I-Xbox Live (Ikona. Ukudlula komdlalo), ngakho-ke ngaphambi kokususa iphrofayili yakho kufanele uqinisekise ukuthi awekho amasevisi wokubhalisa asebenzayo kuyo. Kumasevisi asebenzayo, ngokususa ama-akhawunti e-Microsoft, ungazibeka engcupheni yokukhokhiselwa okuthile ongeke usakwazi ukukusebenzisa.
Ukuqinisekisa ukuthi awekho amasevisi asebenzayo ku-akhawunti yakho, chofoza lapha ukuxhuma kuphaneli yokuphatha yokubhalisa bese uqinisekisa ukuthi akukho okubhaliselwe okuboniswayo. Uma, kunalokho, kukhona okubhaliselwe, susa konke ngokucindezela inketho ehambisanayo.
También le sugiero que preste especial atención a la presencia de noma yikuphi ezilinganisweni zamakhadi wesipho we-Microsoft noma we-Xbox, engasebenza ku-akhawunti yakho. Uma unebhalansi yekhadi lesipho, kufanele ulisebenzise ngaphambi kokususa i-akhawunti yakho ye-Microsoft. Ngaphandle kwalokho, ibhalansi etholwe ngamakhadi ezipho izolahleka nakanjani lapho i-akhawunti ivaliwe.
Futhi, uma usebenzise i-akhawunti yakho kuze kube manje ukuthumela nokwamukela ama-imeyili nge-Outlook.com, sicela wazi ukuthi ngaphambi kokuyisusa, kungasiza. landa ikhophi yemilayezo yakho noxhumana nabo ezixhunywe kuyo. Uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani, funda imihlahlandlela yami yokuthi ungathumela kanjani ama-imeyili kusuka ku-Outlook nokuthi ungathumela kanjani incwadi yamakheli ye-Outlook engikunikeze ngayo zonke izinyathelo okufanele uzilandele ngendlela enemininingwane ephelele.
Ekugcineni, yazi ukuthi uma uhlose ukususa i-akhawunti ye-Microsoft ngoba awusalithandi igama olikhethile (leyo yingxenye eza ngaphambi @) futhi ungabhekana nakho uma udala alias, okungukuthi, amakheli e-imeyili wesibili abhekisa kukheli eliyinhloko.
Ukwakha i-alias, vele uye kusigaba solwazi se-akhawunti yakho ye-Microsoft bese ukhetha into Phatha ukuthi ungene kanjani ngemvume kuMicrosoft. Okulandelayo, qinisekisa ubuwena ngokufaka iphasiwedi yakho noma ikhodi yokuphepha etholwe nge-SMS / uhlelo lokusebenza, noma, uma ungakakwenzi lokho, khombisa ukuthi iyiphi indlela ohlose ukuyisebenzisa ukuvikela i-akhawunti.
Cindezela, ngakho-ke, ezwini Faka i-imeyili Isijobelelo esigabeni I-alias dell'account bese ugcwalisa ifomu eliboniswe kufayela le- isikrini ngokuthayipha ikheli le-imeyili ofuna ukulisebenzisa njengegama.
Lapho usuzenzile lezi zinyathelo ezingenhla, ukuze khipha i-akhawunti ye-Microsoft, la primera operación que kumele realizar es conectarte al panel de administración del mismo. Para hacer esto, haga clic aquí, luego inicie sesión en el servicio con la cuenta que desea cerrar y haga clic en Igama lakho, ibekwe ngaphezulu kwesokunxele.
Ekhasini elisha elivulekile, chofoza kusixhumanisi Ungayivala kanjani i-akhawunti yakho ezansi kwekhasi (ngakwesobunxele) futhi, ngemuva kokufunda imininingwane ngenqubo okukhulunywa ngayo, chofoza inkinobho Dlulisela (Ekupheleni kwekhasi).
Kamuva, ekhasini elisanda kuvulwa, kufanele faka uphawu lokuhlola kuwo wonke amabhokisi owabona esibukweni futhi, ngemuva kokukhombisa isizathu sokuvala iphrofayili kusuka kumenyu Khetha isizathu, chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka Maka i-akhawunti ngokuvala.
Ngalesi sikhathi ungakwazi decirte a ti mismo más que satisfecho: finalmente has logrado completar todo el procedimiento para poder eliminar una cuenta de Microsoft. ¡Felicidades!
Uma ungabaza, yazi ukuthi ungabuyisa izinyathelo zakho bese uphinde uvule i-akhawunti yakho zingakapheli izinsuku ezingama-60 ngemuva kokuba inqubo yenziwe Okusanda kwenziwa. Ngaleso sikhathi, i-akhawunti imakwe ukuthi ivalwe, kepha isekhona namanje.
Ukuze uvule kabusha i-akhawunti ye-Microsoft esusiwe, kuzodingeka ukwazi ukufakazela ukuthi usebenzisa imininingwane yamanje yokuphepha ye-akhawunti yakho. Ukuze wenze lokhu, mane uxhume kwi-akhawunti yakho ye-Microsoft ku-Outlook.com noma kunoma iyiphi enye iwebhusayithi yenkampani, ngena ngemvume ngemininingwane ye-akhawunti oyimake ngokuvalwa, bese uchofoza inkinobho Vula i-akhawunti yakho futhi.
Kuzodingeka ukuthi uqinisekise ubuwena ngokwamukela irisidi ye- ikhodi yezokuphepha nge-imeyili noma nge-SMS / uhlelo lokusebenza futhi ukuze uqede kuzodingeka ucindezele inkinobho Kuhle. Iqiniso elilula?
Esimweni esidabukisayo obukade ucabanga ngaso kodwa isikhathi esiphezulu sokuvula kabusha i-akhawunti yakho ye-Microsoft sesidlulile, ngiyaxolisa ukukutshela, kodwa kulesi sigaba sesimo akusakwazi ukwenza lutho.
Kodwa-ke, uma ubona kufanelekile, ungakha i-akhawunti entsha ye-Microsoft ngokulandela imiyalo engikunikeze yona kumhlahlandlela wami wokuthi ungayakha kanjani i-akhawunti ye-Microsoft.
Ake sibheke manje ungayikhipha kanjani i-akhawunti ye-Microsoft kusuka kudivayisi. Okulandelayo, ngizochaza ukuthi ngikwenza kanjani lokhu kwiWindows, kepha nakuMacOS, i-Android ne-iOS / iPadOS (ukube bengangeze i-akhawunti kulezi zingxenyekazi ukuvumelanisa oxhumana nabo nama-akhawunti we-imeyili).
Ake siqale ngokubona ungayikhipha kanjani i-akhawunti ye-Microsoft ku-Windows. Okokuqala, vula ifayela le- Iphaneli yokulawula IWindows (ungayisesha kufayela le- Ibha yokusesha yaseCortana etholakala kubha yomsebenzi we Windows 10 noma ngokuchofoza entweni yemenyu ehambisanayo Qala, kuzo zonke izinhlobo zohlelo lokusebenza lweMicrosoft).
Bese uchofoza amagama I-akhawunti yomsebenzisi futhi, ewindini elisha elivulayo, chofoza leyo nto futhi I-akhawunti yomsebenzisi. Bese ukhetha izinto Phatha enye i-akhawunti> Susa i-akhawunti Futhi yilokho. Uma kwenzeka ufuna ukugcina amafayela we-akhawunti okukhulunywa ngayo, khumbula ukukhetha inketho Gcina amafayela.
Ngeminye imininingwane yokuthi ungayicisha kanjani i-akhawunti kwi-PC yakho (hhayi i-akhawunti ye-Microsoft kuphela), ngincoma ukuthi ufunde umhlahlandlela engiwunikele ngokuphelele kulesi sihloko.
Uma ungeze i- I-akhawunti ye-Microsoft Alabama Mac Ukuyisebenzisa kuMeyili, kuKhalenda, noma kwezinye izinhlelo zokusebenza, ungayisusa ngokuya kuzilungiselelo ze-MacOS.
Ngakho-ke, hlela ukuvula i Izintandokazi zesistimu, ngokuchofoza kusithonjana esimpunga nge amagiya etholakala ku-Dock noma ku-Launchpad bar, bese ufinyelela isigaba I-akhawunti ye-inthanethi.
Bese ukhetha u-I-akhawunti ye-Microsoft ukususa ngokuchofoza i- Igama (kubha eseceleni yangakwesobunxele) futhi, ngemuva kokuhlola amabhokisi Imeyili, Oxhumana nabo, Ikhalenda mi Notechofoza inkinobho (-) bese uchofoza inkinobho OK.
Ngokususa i-akhawunti, imininingwane emayelana nawe izosuswa ezinhlelweni zokusebenza ozikhethe ngaphambilini.
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Microsoft ku-Android
Por susa i-akhawunti ye-Microsoft ku-Android, Udinga ukuya kuzilungiselelo zohlelo bese uqhubeka ngqo kusuka lapho.
Ngakho-ke, qhubeka nokuvula uhlelo lokusebenza. Izilungiselelo, ngokucindezela isithonjana se isondo lamagiya ukwethula esikrinini sasekhaya noma ekhabetheni bese uthepha amagama I-Akhawunti.
Manje chofoza okukhethiwe Microsoft (o panorama Los Ihhovisi, njengoba kusebenza), futhi uma une-akhawunti engaphezu kweyodwa ye-Microsoft ehlotshaniswa nedivayisi yakho, khetha leyo ofuna ukuyisusa. Bese uthepha inketho Susa Los Susa futhi uqinisekise ukusebenza ngokucindezela inkinobho Susa i-akhawunti Los Susa i-akhawunti. Umdlalo uphelile!
Ukususa i-akhawunti ye-Microsoft kweyakho iPhone Los iPad, okudingeka ukwenze ukufinyelela kuzilungiselelo i-iOS / IPOS, thola isigaba esinikezelwe kuma-akhawunti axhunywe kudivayisi yakho bese ususa leyo oyithandayo.
Ukuze uqhubeke, vula uhlelo lokusebenza Izilungiselelo IOS / iPadOS, ucindezela isithonjana esimpunga nge amagiya ukwethula esikrinini sasekhaya, cindezela izinto Imeyili Los Oxhumana nabo futhi, kusikrini esisha esivulekile, thepha amagama I-Akhawunti nasezwini panorama.
Bese ucindezela inkinobho Susa i-akhawunti futhi uqinisekise ukusebenza ngokuthinta into Susa i-iPhone Los Susa kusuka ku-iPad, ukususa yonke idatha ephathelene ne-akhawunti ezosuswa kudivayisi yakho. Ngemuva kwalokho linda imizuzwana bese i-akhawunti ye-Microsoft izosuswa kudivayisi yakho ye-Apple.
Usufikile kulo mhlahlandlela thola ungayicisha kanjani i-akhawunti yamaqembu e-Microsoft? Uma uyenzile le akhawunti ngeMicrosoft futhi usuyisusile eyokugcina ngokulandela imiyalo enikezwe ezahlukweni ezedlule, akudingeki ukuthi wenze enye into, ngoba ngokususa i-akhawunti ye-Microsoft uzobe usule i-akhawunti yamaqembu . ngenxa yalokho.
Ngaphandle kwalokho, uma udale i-akhawunti yakho Yamaqembu ngokubhaliselwe kwe-Microsoft 365, kuzodingeka ukhansele lokho okubhalisele ukwenza kanjalo. Uma ufuna ulwazi oluthe xaxa ngayo, ngikuthumela ukuthi ufunde umhlahlandlela engichaza kuwo kabanzi ukuthi ungasusa kanjani ama-akhawunti e-Microsoft Teams.
Ungabuka kanjani ukubuyekeza kwami ​​ku-Amazon
Uhlelo lokusebenza ukubona ukuthi ubani obuka iphrofayela yakho ye-Instagram